काठमाडौंमा फेरि निषेधाज्ञाः के खुल्ला ? के बन्द ? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंमा फेरि निषेधाज्ञाः के खुल्ला ? के बन्द ? (सूचीसहित)
काठमाडौंः कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौं उपत्यकामा जारी साबिकको निषेधाज्ञा असोज १ गतेबाट अर्को आदेश नभएसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू तथा सम्बद्ध जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकारीहरूको बुधबार साँझ बसेको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञालाई अहिलेकै अवस्थामा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
याे पनि पढ्नुस दाहसंस्कार गरेको तीन दिनपछि कोरोना पोजेटिभ, तनावमा ५० मलामी
के खुल्ला ? के बन्द ?
याे पनि पढ्नुस यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १६ निर्णय (सूचीसहित)
ट्याग्स: काठमाडौं उपत्यका, कोरोना, निषेधाज्ञा